အိမ်ကွင်းမှာလည်း နိုင်ဦးမှာမဟုတ်တဲ့ ယူနိုက်တက် အပါအ၀င် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ( ၇ ) အတွက် ချာလီနီကိုလပ်စ် ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်များ - SPORTS MYANMAR
အိမ်ကွင်းမှာလည်း နိုင်ဦးမှာမဟုတ်တဲ့ ယူနိုက်တက် အပါအ၀င် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ( ၇ ) အတွက် ချာလီနီကိုလပ်စ် ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်များ
ကာရာဘောင် ဖလား ပွဲစဉ် တွေအပြီး မှာတော့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ( ၇ ) ကို ရောက်ရှိ လို့ လာခဲ့ ပြီဖြစ် ပါတယ် ။ ယခု အပတ် မှာ လည်း အိုးထရက်ဖိုဒ့် ကွင်း က မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် နဲ့ အာဆင်နယ် တို့ ရဲ့ ပွဲစဉ် အပါအ၀င် အဲဗာတန် – မန်စီးတီး ၊ တန်းဆင်းဇုံ ထဲ က ၀ုဗ် နဲ့ ၀က်ဖိုဒ့် တို့ရဲ့ ပွဲစဉ်တွေ ပါဝင် လာခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ပရီးမီး ယားလိဂ် ပွဲစဉ် ( ၇ ) မှာ ဘယ်လို ရလဒ် တွေ ထွက်ပေါ် နိုင်မလဲ ဆိုတာ ကို ချာလီ နီကိုလပ်စ် ရဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေ ကို လေ့လာ ကြည့်ကြရ အောင် . . .
၁ ။ ရှက်ဖီး ယူနိုက်တက် – လီဗာပူး
အဲဗာတန် နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ရှက်ဖီး ယူနိုက်တက် ရဲ့ ခြေစွမ်းကို ကျွန်တော် အကဲခတ် ခဲ့ ပါတယ် ။ သူတို့ အဲ့ဒီ ပုံစံ အတိုင်း ဆိုရင် လီဗာပူး ကို အခက် တွေ့ စေမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် လီဗာပူး ဟာ ကစားပုံ မကောင်းရင် တောင် အနိုင် ရအောင် ကစားပါလိမ့်မယ် ။ ရှက်ဖီး ရဲ့ ပြဿနာ က ဂိုး သွင်းဖို့ ခက်ခဲ တာပါ ။ လီဗာပူး ဟာ ရှက်ဖီး ကြောင့် အခက်တွေ့ နိုင်ပေမယ့် နောက်ဆုံး မှာတော့ ဆာလာ ၊ မာနေး တို့ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေ က ၃ မှတ်ရ စေ ပါလိမ့်မယ် ။
ခန့်မှန်းချက် – ရှက်ဖီး ယူနိုက်တက် ၁ – ၃ လီဗာပူး
၂ ။ ချဲလ်ဆီး – ဘရိုက်တန်
ချဲလ်ဆီး ဘက်မှာ အပေါင်း လက္ခဏာ ဆောင်မှု တွေ အများကြီး မြင်တွေ့ နေရ ပါတယ် ။ လူငယ်တွေ နေရာ ရလာတယ် ၊ ဟတ်ဆန် အိုဒွိုင်း ကို စာချုပ်သစ် ချုပ်နိုင် ခဲ့သလို ကာရာဘောင် ပွဲမှာ လည်း ၀င်ကစားပြီး ဂိုးသွင်း နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ် မှာတော့ သူတို့ရဲ့ အဆင့် ကို ဆွဲတင် နိုင်ဖို့ လိုအပ် နေပါ သေးတယ် ။ ဘရိုက်တန် ဘက် မှာ ဒဏ်ရာ ကစား သမားတွေ ရှိနေ ပါတယ် ။ သူတို့ရဲ့ ကစားပုံ ကလည်း လေးလံ ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် တမ်မီ အေဘရာဟမ် ရဲ့ မြန်နှုန်း ကို ပွဲပြည့် ထိန်းနိုင်ဖို့ မလွယ်ကူ ပါဘူး ။
ခန့်မှန်းချက် – ချဲလ်ဆီး ၃ – ၁ ဘရိုက်တန်
၃ ။ တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး – ဆောက်သမ်တန်
ဒီပွဲ မှာတော့ စပါးတို့ အောင်ပွဲဆင် နိုင်မှာပါ ။ ဆောက်သမ်တန် ကတော့ ပိုစ့်မောက် ဒါဘီ မှာ အနိုင် ရလိုက် တာက သူတို့ အတွက် တကယ်ကို ၀မ်းမြောက်စရာ ဖြစ်စေမှာ အမှန် ပါပဲ ။ စပါး အသင်းထဲ မှာ အဆင် မပြေမှု လေးတွေ ရှိနေ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒါက ဒီပွဲ ကို အနိုင် မရလောက်အောင် တော့ ဖြစ်စေ မှာ မဟုတ် ပါဘူး ။ ကာရာဘောင် ရှုံးပွဲ ကို ပြန်ချေပမယ့် စပါး အတွက် အနိုင်ရဖို့ သေချာ သလောက် ပါပဲ ။
ခန့်မှန်းချက် – စပါး ၂ – ၀ ဆောက်သမ်တန်
၄ ။ အဲဗာတန် – မန်စီးတီး
ရစ်ချလီဆင် ရဲ့ ခြေစွမ်း က တစ်ခါ တစ်လေ နားလည်ရခက် ပါတယ် ။ ဆီဂတ်ဆန် လို ကစား သမား မျိုး က ပံ့ပိုးပေး နေ ပေမယ့် ဘရာဇီးသား က တစ်ခါတစ်လေမှာ စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းနေတတ် ပါတယ် ။ ဂူအိုင်း ဂါနာ ကို ဆုံးရှုံး ခဲ့ရတာ ကလည်း အဲဗာတန် အတွက် အစားထိုးမရတဲ့ နစ်နာမှု ဖြစ်စေခဲ့ ပါတယ် ။ တကယ်လို့ မန်စီးတီး သာ ဂိုး အရင် ရသွားခဲ့ရင် အဲဗာတန် တို့ ဘယ်လို ကစားမလဲ ? ဒါကို မာကို ဆေးလ်ဗား ဖြေရှင်းနိုင် ဖို့ မလွယ် ပါဘူး ။
စီးတီး တိုက်စစ် ကတော့ ဘာနာဒို ဆေးလ်ဗား ၊ အဂွေရို ၊ ဂါဘရီရယ် ဂျေဆူး ၊ ဒီဘရိုင်း တို့နဲ့ အရမ်းကို ကြောက်ဖို့ ကောင်းနေ ပါတယ် ။ ဒီပွဲ မှာလည်း သူတို့ အဲဗာတန် ကို ထိုးနှက် နေဦးမှာပါ။
ခန့်မှန်းချက် – အဲဗာတန် ၁ – ၃ မန်စီးတီး
၅ ။ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် – အာဆင်နယ်
ဒီပွဲကတော့ ကြည့်ရင်း ရီရမယ့် ပွဲပါ ။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ အိတ်ပေါက်တွေ နဲ့ ဖားကောက် နေကြမှာ မို့လို့ပါပဲ ။ ယူနိုက်တက် မှာ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံးလို့ ဆိုတဲ့ ဂိုးသမား ၊ ဈေးအကြီးဆုံး ဆိုတဲ့ နောက်တန်း တို့ ရှိနေ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ၀က်စ်ဟမ်း နဲ့ ပွဲမှာ အားလုံး မြင်ကြတဲ့ အတိုင်းပါပဲ ။ အာဆင်နယ် က လည်း အခု ထိ ဘယ်သူ့ကို ခေါင်းဆောင် တင်ရမှန်း ကို မသိ ဖြစ်နေ ပါတယ် ။
ကစားပုံ နဲ့ လူညီတာ ကတော့ အာဆင်နယ် က ပိုသာပါတယ် ။ အာဆင်နယ် ဘက်မှာ ကြည့်ချင် စရာ ကောင်းတဲ့ ကစား သမားတွေ လည်း ပိုများ ပါတယ် ။ အော်ဘားမီးယန်း ကစားပုံ က ရိုးရိုး ရှင်းရှင်း နဲ့ ထိရောက် ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ဘက် မှာတော့ ဘယ်သူတွေ ၀င် ကစားနိုင်မလဲ ဆိုတာ သေချာ မသိပါဘူး ။ အာဆင်နယ် သာ ကစားပုံ နဲ့ လူစာရင်း သေချာ ထုတ်နိုင်ရင် အဝေးကွင်းမှာ အသာရနိုင် ပါတယ် ။ ယူနိုက်တက် ဟာ အိမ်ရှင် ဖြစ်ပေမယ့် အာဆင်နယ် ကို လွှမ်းမိုးနိုင် ဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး ။ တော်မီနေး နဲ့ ပေါ့ဘာ လောက်ပဲ ရှိတဲ့ အသင်း ဟာ အော်ဘားမီးယန်း ၊ ပီပီ ၊ ဂွမ်ဒိုဇီ ၊ ဆီဘယ်လော့ တို့ အစွမ်းပြ နေတဲ့ အသင်း ကို လွှမ်းမိုး နိုင်ဖို့ ဆိုတာ ပြောရခက်တဲ့ ကိစ္စ ပါပဲ ။ ဒီတစ်ခါ တော့ အာဆင်နယ်တို့ အောင်ပွဲဆင်နိုင် မယ့် ပုံပါပဲ ။
ခန့်မှန်းချက် – မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ၁ – ၂ အာဆင်နယ်
အခြားပွဲစဉ် ခန့်မှန်းမှုရလဒ်များ –
၆ ။ ပဲလေ့စ် ၁ – ၀ နောဝှစ်ခ်ျ
၇ ။ ဗီလာ ၁ – ၁ ဘန်လေ
၈ ။ ဘုန်းမောက် ၂ -၂ ၀က်စ်ဟမ်း
၉ ။ ၀ုဗ် ၁ – ၀ ၀က်ဖိုဒ့်
၁၀ ။ လက်စတာ ၂ – ၀ နယူးကာဆယ်
ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ ခန့်မှန်းချက် က ရော ဘယ်လို ဖြစ်မလဲ ဗျာ . . .
အိမျကှငျးမှာလညျး နိုငျဦးမှာမဟုတျတဲ့ ယူနိုကျတကျ အပါအဝငျ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျ ( ရ ) အတှကျ ခြာလီနီကိုလပျဈ ရဲ့ ခနျ့မှနျးခကျြမြား
ကာရာဘောငျ ဖလား ပှဲစဉျ တှအေပွီး မှာတော့ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျ ( ရ ) ကို ရောကျရှိ လို့ လာခဲ့ ပွီဖွဈ ပါတယျ ။ ယခု အပတျ မှာ လညျး အိုးထရကျဖိုဒျ့ ကှငျး က မနျခကျြ စတာ ယူနိုကျတကျ နဲ့ အာဆငျနယျ တို့ ရဲ့ ပှဲစဉျ အပါအဝငျ အဲဗာတနျ – မနျစီးတီး ၊ တနျးဆငျးဇုံ ထဲ က ၀ုဗျ နဲ့ ၀ကျဖိုဒျ့ တို့ရဲ့ ပှဲစဉျတှေ ပါဝငျ လာခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ ပရီးမီး ယားလိဂျ ပှဲစဉျ ( ရ ) မှာ ဘယျလို ရလဒျ တှေ ထှကျပျေါ နိုငျမလဲ ဆိုတာ ကို ခြာလီ နီကိုလပျဈ ရဲ့ သုံးသပျခကျြတှေ ကို လလေ့ာ ကွညျ့ကွရ အောငျ . . .
၁ ။ ရှကျဖီး ယူနိုကျတကျ – လီဗာပူး
အဲဗာတနျ နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ရှကျဖီး ယူနိုကျတကျ ရဲ့ ခွစှေမျးကို ကြှနျတျော အကဲခတျ ခဲ့ ပါတယျ ။ သူတို့ အဲ့ဒီ ပုံစံ အတိုငျး ဆိုရငျ လီဗာပူး ကို အခကျ တှေ့ စမှောပါ ။ ဒါပမေယျ့ လီဗာပူး ဟာ ကစားပုံ မကောငျးရငျ တောငျ အနိုငျ ရအောငျ ကစားပါလိမျ့မယျ ။ ရှကျဖီး ရဲ့ ပွဿနာ က ဂိုး သှငျးဖို့ ခကျခဲ တာပါ ။ လီဗာပူး ဟာ ရှကျဖီး ကွောငျ့ အခကျတှေ့ နိုငျပမေယျ့ နောကျဆုံး မှာတော့ ဆာလာ ၊ မာနေး တို့ရဲ့ သှငျးဂိုးတှေ က ၃ မှတျရ စေ ပါလိမျ့မယျ ။
ခနျ့မှနျးခကျြ – ရှကျဖီး ယူနိုကျတကျ ၁ – ၃ လီဗာပူး
၂ ။ ခြဲလျဆီး – ဘရိုကျတနျ
ခြဲလျဆီး ဘကျမှာ အပေါငျး လက်ခဏာ ဆောငျမှု တှေ အမြားကွီး မွငျတှေ့ နရေ ပါတယျ ။ လူငယျတှေ နရော ရလာတယျ ၊ ဟတျဆနျ အိုဒှိုငျး ကို စာခြုပျသဈ ခြုပျနိုငျ ခဲ့သလို ကာရာဘောငျ ပှဲမှာ လညျး ၀ငျကစားပွီး ဂိုးသှငျး နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ပရီးမီးယားလိဂျ မှာတော့ သူတို့ရဲ့ အဆငျ့ ကို ဆှဲတငျ နိုငျဖို့ လိုအပျ နပေါ သေးတယျ ။ ဘရိုကျတနျ ဘကျ မှာ ဒဏျရာ ကစား သမားတှေ ရှိနေ ပါတယျ ။ သူတို့ရဲ့ ကစားပုံ ကလညျး လေးလံ ပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ တမျမီ အဘေရာဟမျ ရဲ့ မွနျနှုနျး ကို ပှဲပွညျ့ ထိနျးနိုငျဖို့ မလှယျကူ ပါဘူး ။
ခနျ့မှနျးခကျြ – ခြဲလျဆီး ၃ – ၁ ဘရျိုကျတနျ
၃ ။ တော့တငျဟမျ ဟော့စပါး – ဆောကျသမျတနျ
ဒီပှဲ မှာတော့ စပါးတို့ အောငျပှဲဆငျ နိုငျမှာပါ ။ ဆောကျသမျတနျ ကတော့ ပိုဈ့မောကျ ဒါဘီ မှာ အနိုငျ ရလိုကျ တာက သူတို့ အတှကျ တကယျကို ၀မျးမွောကျစရာ ဖွဈစမှော အမှနျ ပါပဲ ။ စပါး အသငျးထဲ မှာ အဆငျ မပွမှေု လေးတှေ ရှိနေ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ဒါက ဒီပှဲ ကို အနိုငျ မရလောကျအောငျ တော့ ဖွဈစေ မှာ မဟုတျ ပါဘူး ။ ကာရာဘောငျ ရှုံးပှဲ ကို ပွနျခပြေမယျ့ စပါး အတှကျ အနိုငျရဖို့ သခြော သလောကျ ပါပဲ ။
ခနျ့မှနျးခကျြ – စပါး ၂ – ၀ ဆောကျသမျတနျ
၄ ။ အဲဗာတနျ – မနျစီးတီး
ရဈခလြီဆငျ ရဲ့ ခွစှေမျး က တဈခါ တဈလေ နားလညျရခကျ ပါတယျ ။ ဆီဂတျဆနျ လို ကစား သမား မြိုး က ပံ့ပိုးပေး နေ ပမေယျ့ ဘရာဇီးသား က တဈခါတဈလမှော စိတျပကျြဖို့ ကောငျးနတေတျ ပါတယျ ။ ဂူအိုငျး ဂါနာ ကို ဆုံးရှုံး ခဲ့ရတာ ကလညျး အဲဗာတနျ အတှကျ အစားထိုးမရတဲ့ နဈနာမှု ဖွဈစခေဲ့ ပါတယျ ။ တကယျလို့ မနျစီးတီး သာ ဂိုး အရငျ ရသှားခဲ့ရငျ အဲဗာတနျ တို့ ဘယျလို ကစားမလဲ ? ဒါကို မာကို ဆေးလျဗား ဖွရှေငျးနိုငျ ဖို့ မလှယျ ပါဘူး ။
စီးတီး တိုကျစဈ ကတော့ ဘာနာဒို ဆေးလျဗား ၊ အဂှရေို ၊ ဂါဘရီရယျ ဂဆြေူး ၊ ဒီဘရိုငျး တို့နဲ့ အရမျးကို ကွောကျဖို့ ကောငျးနေ ပါတယျ ။ ဒီပှဲ မှာလညျး သူတို့ အဲဗာတနျ ကို ထိုးနှကျ နဦေးမှာပါ။
ခနျ့မှနျးခကျြ – အဲဗာတနျ ၁ – ၃ မနျစီးတီး
၅ ။ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ – အာဆငျနယျ
ဒီပှဲကတော့ ကွညျ့ရငျး ရီရမယျ့ ပှဲပါ ။ ဘာလို့လညျး ဆိုတော့ အိတျပေါကျတှေ နဲ့ ဖားကောကျ နကွေမှာ မို့လို့ပါပဲ ။ ယူနိုကျတကျ မှာ ကမ်ဘာ့ အကောငျးဆုံးလို့ ဆိုတဲ့ ဂိုးသမား ၊ စြေးအကွီးဆုံး ဆိုတဲ့ နောကျတနျး တို့ ရှိနေ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ၀ကျဈဟမျး နဲ့ ပှဲမှာ အားလုံး မွငျကွတဲ့ အတိုငျးပါပဲ ။ အာဆငျနယျ က လညျး အခု ထိ ဘယျသူ့ကို ခေါငျးဆောငျ တငျရမှနျး ကို မသိ ဖွဈနေ ပါတယျ ။
ကစားပုံ နဲ့ လူညီတာ ကတော့ အာဆငျနယျ က ပိုသာပါတယျ ။ အာဆငျနယျ ဘကျမှာ ကွညျ့ခငျြ စရာ ကောငျးတဲ့ ကစား သမားတှေ လညျး ပိုမြား ပါတယျ ။ အျောဘားမီးယနျး ကစားပုံ က ရိုးရိုး ရှငျးရှငျး နဲ့ ထိရောကျ ပါတယျ ။
ယူနိုကျတကျ ဘကျ မှာတော့ ဘယျသူတှေ ၀ငျ ကစားနိုငျမလဲ ဆိုတာ သခြော မသိပါဘူး ။ အာဆငျနယျ သာ ကစားပုံ နဲ့ လူစာရငျး သခြော ထုတျနိုငျရငျ အဝေးကှငျးမှာ အသာရနိုငျ ပါတယျ ။ ယူနိုကျတကျ ဟာ အိမျရှငျ ဖွဈပမေယျ့ အာဆငျနယျ ကို လှမျးမိုးနိုငျ ဖို့ မလှယျကူပါဘူး ။ တျောမီနေး နဲ့ ပေါ့ဘာ လောကျပဲ ရှိတဲ့ အသငျး ဟာ အျောဘားမီးယနျး ၊ ပီပီ ၊ ဂှမျဒိုဇီ ၊ ဆီဘယျလော့ တို့ အစှမျးပွ နတေဲ့ အသငျး ကို လှမျးမိုး နိုငျဖို့ ဆိုတာ ပွောရခကျတဲ့ ကိစ်စ ပါပဲ ။ ဒီတဈခါ တော့ အာဆငျနယျတို့ အောငျပှဲဆငျနိုငျ မယျ့ ပုံပါပဲ ။
ခနျ့မှနျးခကျြ – မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ၁ – ၂ အာဆငျနယျ
အခွားပှဲစဉျ ခနျ့မှနျးမှုရလဒျမြား –
၆ ။ ပဲလစျေ့ ၁ – ၀ နောဝှဈချြ
၇ ။ ဗီလာ ၁ – ၁ ဘနျလေ
၈ ။ ဘုနျးမောကျ ၂ -၂ ၀ကျဈဟမျး
၉ ။ ၀ုဗျ ၁ – ၀ ၀ကျဖိုဒျ့
၁၀ ။ လကျစတာ ၂ – ၀ နယူးကာဆယျ
ပရိသတျကွီးတို့ရဲ့ ခနျ့မှနျးခကျြ က ရော ဘယျလို ဖွဈမလဲ ဗြာ . . .